Best ngesanti kubunzulu baphantsi isilinda engenan- umbhobho sentsimbi yoMvelisi kunye Factory | EWenyue
Ngenxa yokushiyeka komphezulu wentsalela yoxinzelelo olushiyekileyo kumaleko omphezulu wesilinda esisebenza ngamanzi, kuyanceda ukuvala umphezulu wentanda kunye nokuthintela ukwanda kokhukuliseko lomhlaba. Ke, ukumelana komphezulu womhlaba kungaphuculwa, kwaye ukuveliswa okanye ukwanda kokudinwa kokudinwa kunokubambezeleka, kungoko amandla okudinwa kwetyhubhu ejijekileyo ingaphuculwa. Ngokuqengqeleka bokwakha, umaleko lomsebenzi obandayo wokomisa umaleko wenziwa kwindawo eqengqelekayo, okunciphisa ukutyeba kobuso bomhlaba wonxibelelwano wesibini sokugaya.
Ke ngoko, ukuxhathisa ukunxiba eludongeni lwangaphakathi lwetyhubhu ye-quilting kuyaphuculwa kwaye ukutsha okubangelwe kukusila kuthintelwe. Emva kokuqengqeleka, ukuncitshiswa koburhabaxa bomhlaba kunokuphucula iipropathi ezifanayo.
Ukuziqengqa luhlobo lwetshiphu ye-chip yasimahla, esebenzisa isiseko seplastikhi yentsimbi kubushushu begumbi ukucofa ukungalingani kwendawo yokusebenza, ukuze utshintshe ubume bomhlaba, iipropathi zoomatshini, imilo kunye nobungakanani. Ke ngoko, le ndlela inokufezekisa kokubini ukugqiba kunye nokomeleza ngaxeshanye, ekunokwenzeka ukuba kusile.
Nokuba kungasetyenziswa hlobo luni lokuqhubekeka, kuya kuhlala kukho amanqaku angalinganiyo kwisixhobo kumphezulu weendawo, okukhokelela kwiincopho kunye neentlambo, Umgaqo wokuqhubekeka wokuqengqeleka: luhlobo lokugqitywa koxinzelelo, olusebenzisa uphawu lweplastikhi ebandayo yesinyithi kubushushu begumbi, kwaye isebenza uxinzelelo oluthile kubuso bendawo yokusebenza ngokuqengqeleka izixhobo zokwenza isinyithi kumphezulu womsebenzi zivelise ukuhamba kweplastikhi kwaye ugcwalise intsalela yentsimbi eseleyo, ukunciphisa uburhabaxa bomhlaba indlela yokusebenza. Ngenxa yokuguquluka kweplastikhi yentsimbi yomphezulu esongiweyo, ubume bomhlaba buyabanda buqinile kwaye iinkozo ziba ntle, zenza umaleko oxineneyo kunye nokwenza umaleko woxinzelelo olushiyekileyo. Ubulukhuni kunye namandla omphezulu aphuculwe, ke ukumelana nokunxiba, ukumelana nokubola kunye nokuhambelana kwendawo yokusebenza kuphuculwe. Ukurola yindlela yokusika yeplastikhi yasimahla.
Izinto eziluncedo kumbhobho wesinyithi ongenamthungo kwisilinda ye-hydraulic:
1. Uburhabaxa bomhlaba bunokufikelela kwi-RA ≤ i-0.08 & encinci; M.
2. Ubume obunokubakho bunokuba yi ≤ 0.01mm.
3. Ubunzima bomphezulu bonyuswe ukuphelisa uxinzelelo, kunye nobulukhuni bonyuswe nge-HV-4 °
4. Emva koomatshini, kukho intsalela yokuxinzezeleka koxinzelelo, kwaye amandla okudinwa anyuswe nge-30%.
5.Ingaphucula umgangatho ofanayo, ukunciphisa ukunxiba kunye nokwandisa ubomi benkonzo yamalungu, kodwa iindleko zokuqhubekeka kwamalungu ziyancitshiswa.
Egqithileyo Precision umbhobho intsimbi ingenamthungo